Zvikwata zveMakambani uye Embossers ema Corporations uye maAdvs
Yedu yakanaka Custom Corporate Seal / Embosser inosanganisirwa yedu Corporate uye LLC kits. Yakagadzirwa nesimbi asi irinyore uye iri nyore kushandisa, zvisimbiso zvemakambani senge zvedu zvingadikanwa nenyika zhinji kuti zviitwe.
Kuti udhame Chishamiso Chemubatanidzwa, ndapota fonera yedu yedhipatimendi rebasa revatengi Mon-Fri pakati 6: 00AM uye 5: 00PM Pacific Nguva pa:
800-830-1055 Toll Yemahara
Kana iwe unogona kushandisa yedu fomu yekuisa kutumira pano: Ronga Chisungo Chemubatanidzwa
Standard Corporate Chisimbiso - $ 56
Iyi modhi yave yakakurumbira nekuda kwekukura kwayo komichi uye yakakwirira-inosimudzira inopa yakasimba, midhiya inofungidzirwa pane chero chero pepa rekutengesa.
Iyi modhi yakagadzirirwa kuisa yakakura kudzvinyirira nesimba shoma. Iyo inokurudzirwa zvakanyanya kuti iwedzere uye yakakwirira-vhoriyamu gwaro mafungidziro.
Huru-Duty Corporate Chisimbiso - $ 72
Iyi yakakura-saizi, inorema basa kambani chisimbiso inopa kunyange kuwedzera mari uye inobvumira yakakura saizi mapepa kuisa. Yakakura kune iwo makuru, ma bulkier zvinyorwa.
Elegant Corporate Chisimbiso - $ 96
Iyo yakanaka yakagadzirwa, simbi dhesiki desiki embosser inoita kuwedzera kwakanyanya kune chero mubatanidzwa kana bhizinesi hofisi. Aya mahwindo emakomputa ari simbi anokandwa, obva apukutwa neruoko kuti agadzire nzvimbo yakasarudzika, yakanaka. Ivo varipo neyakavezwa-yakabikwa epoxy kupera, iyo plated 24K goridhe yakajeka kupedzisa kana kunyange chrome yakaiswa.